I-Android Auto ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi | Iindaba zeGajethi
I-Android Auto ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi
I-Android Auto isekwe ngokumalunga nokufumaneka kubenzi beemoto zangoku, kodwa ngoku uGoogle ufuna ukuba nawuphi na umsebenzisi wayo nayiphi na imoto abenakho okanye angabinalo olu khetho ukuze akwazi ukusebenzisa Isicelo esizimeleyo ukuze bonke abasebenzisi be-Android bakwazi ukusebenzisa le nkqubo.
Ewe, isicelo sele sikhona kwaye siyasebenza kwaye siyafumaneka kwiindawo ezahlukeneyo emhlabeni ukuze abasebenzisi bakwazi ukukhuphela kwaye baqale ukusebenzisa ukuba bafuna. Kulindelwe ukuba phakathi kwanamhlanje nangomso inokukhutshelwa naphina ngaphandle kwengxaki yokufumaneka, ke ungakhathazeki ukuba sonke singonwabela usetyenziso kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu ye-Android, okwangoku. eSpain ngoku iyafumaneka ukuba ikhutshelwe simahla.
Yile nto siyifumana kwinkcazo yesicelo kwiVenkile yeGoogle Play, kodwa ngolu hlaziyo luza kwisicelo imoto ehambelanayo ayisayi kufuneka:
Uhlelo lokusebenza lwe-Android Auto luvumela izithuthi ezintsha ezihambelana ne-Android Auto ukuba zidityaniswe kwi-Android 5.0 kunye neefowuni zamva (iLollipop okanye iMarshmallow). Ngaba unayo imoto kunye nefowuni ehambelanayo? Kuya kufuneka uqhagamshele ifowuni yakho kwizibuko le-USB lemoto yakho ukuqala ukuyisebenzisa.
I-Android Auto ikuvumela ukuba usebenzise ezona fowuni zisebenzisayo kwiscreen sakho semoto ngendlela elungiselelwe ukuze ubone kwaye ufunde ulwazi xa uthi krwaqu xa uqhuba. I-Android Auto ifuna uqhagamshelo lwedatha olusebenzayo ukuze isebenzise ngokupheleleyo usetyenziso, kwaye kusenokufuneka uhlaziye ezinye zezicelo zakho zangoku, ezinje ngeMephu zikaGoogle, Google Play Umculo, okanye uPhendlo lukaGoogle. Ukufumanisa ukuba imoto yakho iyahambelana ne-Android Auto, jonga incwadana yomsebenzisi okanye unxibelelane nomenzi wezithuthi.
Iindaba malunga nesicelo esizimeleyo esingadingi moto ehambelanayo ukuba zisetyenziselwe ukufikelela kuthi ukusuka kwi-Android Central Kwaye ujongano luhlengahlengisiwe ukuze lufane nesicelo esibonakala ngeAustralia Auto yokuqala. Kwimeko nayiphi na imeko sonke sinokuvavanya isicelo kunye usetyenziso oludibeneyo okwangoku alukho ninzi, kodwa ngethemba ngokuhamba kwexesha baya kwanda.
Ukuba unesicelo se-Android Auto esifakwe kwisixhobo sakho, uyakufumana kungekudala-ukuba awukabikho uhlaziyo oluya kuguqula usetyenziso ngokupheleleyo, kwaye iya kukuvumela ukuba ungene kunxibelelwano ukuza kuthi ga ngoku lubandakanywe kulwazi kunye neenkqubo zokuzonwabisa zezithuthi ezihambelanayo, usebenzisa kuphela i-terminal yakho.
Kwakhona, ujongano lwesicelo luye lwahlengahlengiswa ukugcina imigca yoyilo ngamakhadi esele ibandakanya iqonga lokuqala le-Android Auto, kwaye ukubonakala kwayo kulula ngokulula, okuxabisekileyo kuthathelwa ingqalelo iimeko apho isicelo siza kusetyenziswa khona ixesha elininzi.
Okwangoku, ewe, akukho zicelo zininzi zihambelana neAuto Auto kunye neqonga elitsha lezixhobo eziphathwayo, kodwa siyathemba ukuba emva kolu hambo lukaGoogle, abaphuhlisi abaninzi baya kuthatha isigqibo. xolelanisa apps nge Android Auto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Android Auto ngoku iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi
I-Qualcomm ityhila iprosesa eNtsha ye-OnePlus elandelayo
I-Apple inokuvula i-iPhone 7 emhlophe